Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Ollie Watkins Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Ollie Watkins na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezinulo, enyi nwanyi / nwunye ka ibu, arsgbọ ala, Net Worth, Web na Personal Life.
Dị mfe, anyị na-ewetara gị akụkọ ndụ zuru oke nke Ollie Watkins- site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Tupu nke a, lee nchịkọta nkenke foto nke Biography.
Ollie Watkins Bio. Lelee Ndụ Ya Na Nbili
Of mara? October N’ọnwa Ọktoba 2020, Ollie Watkins hibere onwe ya dị ka onye izizi n’ime afọ iri gbara akara ọkpụ atọ megide Liverpool na Premier League. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara banyere Bio- ma eleghị anya n'ihi na ị naghị anụ aha ya tupu ịtọ ya. Ugbu a n'egbughị oge, ka anyị bido akụkọ banyere ntorobịa ya.
Ollie Watkins Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka Biography Starters, aha ya niile bụ Oliver George Arthur Watkins. Ollie dị ka a mụrụ na 30th nke December 1995 na ndị mụrụ ya na Torquay, England. Nwatakịrị bụ otu n'ime ụmụaka ole na ole amụrụ site na mmekọrịta dị n'etiti nna na nne ya.
Ọ bụ ezie na a mụrụ ya na Torquay (obodo mmiri dị na Devon) Watkins nọrọ oge ọ bụ nwata na Newton Abbot. Mgbe ọ bụ nwatakịrị, ọ malitere inwe mmasị na football ma n'oge na-adịghị anya ọ ghọrọ onye nkwado zuru oke nke Torquay United - obere klọb na ọkwa nke ise nke egwuregwu Bekee.
Ollie Watkins Ezigbo Ezinụlọ:
Ndina nke mmalite umeala n'obi Watkins adịghị iche na nke ọtụtụ ndị ọzọ na-egwu Bekee. Na nkenke, ọ na-esite na ezinụlọ dị n'etiti ezinụlọ. Kedu ihe ọzọ? Ndị nne na nna Ollie Watkins atụghị ụjọ mgbe ha ghọtara na ọchịchọ nwa ha nwoke ịbanye na football dị ka ọrụ oge niile.
Ọ bụ ezie na mama ya na papa ya maara banyere nkwa a chọrọ iji bulie onye na-egwu bọl, ha ka kwadoro nrọ Watkins. Maka nwatakịrị nwoke, ịbịa site na ụlọ dị mma na-atụgharị iji nweta nkwado iji bie nrọ ya. N'ịbụ onye na-akwado egwuregwu ahụ, nne ya na nna ya kwenyere na agụmakwụkwọ.
Ollie Watkins Ezinụlọ:
Ee, ị maraworị na ọ bụ onye Britain, mana anyị ga-abanye n'ime mgbọrọgwụ ya. O nwere ike ịbụ na ezinụlọ Ollie Watkins sitere na mpaghara Devon. O nwere ike ịbụ ya kpatara ụlọ ya jiri nọrọ ogologo oge na Newton Abbot.
Ollie Watkins Career Story (Site na Oge Ochie):
Ọ bụ ezie na Watkins na-eto eto nwere mmasị n'ịgba bọl, ndị mụrụ ya chọrọ ka ọ gụọ akwụkwọ. N'ihi ya, ha debanyere aha ya ịga akwụkwọ na South Dartmoor Community College. Mgbe ọ nọ n'ebe ahụ, ọ na-egwu bọl ma gbalịsie ike imere onwe ya aha na pitch.
N'ihe dị ka n'otu oge ahụ na 2003, nwa okorobịa Bekee sonyere na ikpe U-9 na Exeter City Academy mana ọ kwụsịrị ule ahụ. Mgbe ya na ndị nta akụkọ na-ekwu okwu, onye njikwa Exeter, Simon Hayward, kpughere ihe mere ikpe mbụ nke Ollie Watkins ji bụrụ nke ọma. O kwuru;
“Echetara m mgbe m hụrụ Watkins dị ka onye na-eto eto-afọ 9, anyị wee chee na ọ dịbeghị njikere ịbụ otu n’ime ndị egwuregwu agụmakwụkwọ anyị edebanyere aha.
Mgbe ụfọdụ ị ga - enweta nghọta na ụfọdụ ndị egwuregwu agaghị enwe ike ịgafe n'etiti klọb mgbọrọgwụ ha gaa agụmakwụkwọ na oge ahụ. Ọ bụ ya mere na anyị echeghị na Ollie dị njikere maka mgbanwe ahụ. ”
Vingga Na Mgbe Academylọ akwụkwọ Gụsịrị Akwụkwọ:
Kama ịhapụ ịchụso egwuregwu football ya, Watkins kpebisiri ike ịkatọ mmechuihu mbụ ya. N'ụzọ dị mma, a nabatara ya na oge na-esote ịdebanye aha dị ka onye U-10 ọkpụkpọ na Exeter Academy. Otú a ka njem njem football ya si malite.
Dị ka anyị niile maara, ọ na-achọ nkwụsi ike na ịrụsi ọrụ ike iji zụlite nkà a mụrụ anyị. N'otu aka ahụ, Watkins kwụsiri ike na ọzụzụ ya nke na o ji nwayọọ nwayọọ bilie n'etiti ndị ntorobịa a ma ama na agụmakwụkwọ ya.
N'oge na-adịghị anya, onye na-eto eto nwere nkà gosipụtara ọtụtụ ịgba egwu football nke mere ka ọ nweta akara akwụkwọ na 2012. Moreso, ọzụzụ ya mechara kwụọ ụgwọ ka ọ na-emechi nkwekọrịta nkwekọrịta ọkachamara afọ abụọ na Exeter na Eprel 2014.
Ollie Watkins Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Bọchị ndị mbụ nke ọrụ aka ya abụghị nke ebube niile. N'ụzọ dị mwute, Watkins nwetara naanị ohere nke ịme ngosipụta atọ maka Exeter tupu ọ banye Weston-super-Mare na mbinye ego otu ọnwa na njedebe nke 2014. Na klọb ahụ, nwa okorobịa Bekee mere ihe ngosi dị egwu.
Ollie Watkins Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Mgbe ọ laghachiri Exeter, onye ọkpụkpọ egwu ahụ edeghị aha ya na iri na otu mbụ. Agbanyeghị, ọ jiri obere ohere ọ bụla ọ nwetara dochie anya iji gosipụta ihe ngosi dị mma.
Nke nta nke nta, Watkins gara n'ihu na-enwe mmetụta dị mkpa. Na 2016, ọ mebiri na mmalite mmalite. Ọzọkwa, n'oge na-adịghị anya, ọ meriri EFL League Two Player of the Month na EFL Young Player of the Year na 2017. Lee otu o si egosipụta nsọpụrụ ya siri ike.
N'ime ngosi 78 ya niile maka Exeter, Watkins meriri ihe mgbaru ọsọ 26 tupu ọ kwaga Brentford maka ego nkwekọrịta afọ 4 a nụrụ maka £ 1.8 nde. Na Brentford, o meriri ihe mgbaru ọsọ 49 na 143 anya. Emechaa, Watkins sonyeere Ross Barkley na Jack Grealish si Aston Villa maka nkwekọrịta nkwekọrịta afọ ise ruru £ 33 nde na 2020. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ellie Alderson na Ollie Watkins Storyhụnanya Akụkọ:
N'ikwu eziokwu ọ bụla, onye ọkpụkpọ Bekee na-eto eto nwere ike ịnya isi na ịnwe ndụ ịhụnanya zuru oke na nke zuru oke. Iji gwa gị eziokwu, Watkins nwere enyi nwanyị mara mma nke aha ya bụ Ellie Alderson maara.
N'ụzọ na-akpali mmasị, enyi nwanyị Ollie Watkins bụ ihe nlereanya Instagram nke na-akwado ọrụ ya. Nke bụ eziokwu bụ na anyị enweghị ike imebiga ihe oke banyere ọrụ ya na ndụ ya. Ka a sịkwa ihe mere Watkins na-ejikarị ewepụta ya maka mmemme ya na mmemme ya. Nye anya gị na foto a mara mma nke nwunye Ollie Watkins ka ọ bụrụ.
Ollie Watkins Ndụ Nke Onwe:
Anyị enweghị ike ịgbagha eziokwu ahụ bụ na a mụrụ onye ọ bụla nwere ihu ọchị pụrụ iche. Ebe ọ dị otú ahụ, Watkins egosipụtala ọtụtụ àgwà na ịrụ ụka na ịjụ akọ na uche. Ka a sịkwa ihe mere ọtụtụ ndị otu ya ji ele ya anya dị ka onye nwere ntụkwasị obi, onye na-enye ọzụzụ ma na-elekwasị anya
N'adịghị Ngolo Kante, na Aston Villa center na-aga n'ihu bụ enyi na enyi, mkparịta ụka, ma na-adọta ike site na ìgwè mmadụ. Ka a sịkwa ihe mere o ji nwee mmasị na isoro ụmụaka nọrọ oge ụfọdụ na ịsọpụrụ akwụkwọ ịkpọ oku.
Ollie Watkins Web Ndụ:
Onweghi onye na-egwu egwu EPL nke n’enwetaghi ezigbo ego na 21st narị afọ. N'otu aka ahụ, Watkins enwetawo ego zuru ezu nke nwere ike ị nweta onwe ya ndụ okomoko. N'ihi ya, nsogbu ego ọ bụla anaghị enye ya nsogbu.
Ọ bụ ezie na ọ nwara ịzobe ihe nzuzo ya, Watkins ebula Mercedes Benz dị oke ọnụ (ụgbọ ala kachasị amasị ya) n'ala ọzụzụ. Moreso, o nwekwara ụlọ mara mma nke nwere ọdọ mmiri ọdọ mmiri. Lelee ngosipụta nke akụ Watkins n'okpuru.
Ollie Watkins Net thtọ:
Mgbe ọ kwagara Aston Villa, onye ọkpụkpọ egwu a ma ama na-abawanye na usoro ego ya. N'ezie, klọb ọhụrụ Watkins tinyere ya na payroll nke na-eweta ụgwọ ọnwa kwa afọ nke £ 3.9 nde. Chaị! Nke a na - eme ka ego ya ritere ya ji okpukpu isii karịa ego ọ na-enweta kwa afọ na Brentford.
Ollie Watkins Family Life Eziokwu:
Ihe ndekọ nke Watkins agaghị ezu ezu ma ọ bụrụ na ekwughị aha ezinụlọ ya. N'ihi ya, anyị na-ewetara gị ozi gbasara Ezinụlọ ya na-amalite site na nne ya.
Banyere Ollie Watkins Nne:
Ọ na-aga n'ekwughị na onye nyocha a na-asọpụrụ nwere nnukwu nkwado na ịhụnanya site na mama ya. Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime ndị agbụrụ ya hụrụ na ọ dị njọ na ọ kpọghị aha nne ya na nyochaa kemgbe ọ na-ebili ka amara. Anyị niile nwere olile anya na ọ ga-emeju onye ọ bụla ịmata ihe banyere nne ya n'oge na-adịghị anya.
Banyere Ollie Watkins Nna:
Worldwa nke football niile nwere nna na-eme egwuregwu nke nwere ekele maka ịzụlite ya nke ọma. Ọ ga-abụ ihe na-ezighi ezi anyị icheta ọrụ Watkins nke ọma ma chefuo otu onye nyeere ya aka ịchụso ọchịchọ ya. Ọ bụ naanị ndị nna ole na ole ga-anọgide na-enyere ụmụ ha aka mgbe ọnwụnwa mbụ ha n’egwuregwu dara. Nna Watkin bu otu n'ime ha.
Banyere ụmụnne Ollie Watkins:
N'ime nyocha, anyị enweela ike ịnweta eziokwu na Watkins abụghị naanị nwa nke ndị mụrụ ya. Eziokwu ka ekwuru, ọnụọgụ ụmụnne nwoke na ụmụnne nwanyị Watkins ka bụụrụ ndị Fans ihe omimi. Agbanyeghị, mgbe ọ hụrụ na ọ kesara foto ya (nke egosiri n'okpuru) nke ya na nwanne ya nwanyị na-enye ezigbo akaebe na o nwere ụmụnne ndị ọzọ.
Banyere ndị Ollie Watkins:
Anyị enweghị ike ịjụ ma ihe kpatara onye egwu Aston Villa anaghị ekwu maka ezinụlọ ya. O nwere ike ịbụ nna nna ya na nne nne ya anwụọla. Ma ọ bụ na o nwere ihe ọzọ dị iche nke na-akwagide ya ịgbachi nkịtị banyere agbụrụ ya? Nke ọ bụla ọ sọrọ ya bụrụ, anyị nwere olile anya na ọ ga-eme ka anyị kwụsị ịmata ihe n’oge na-adịghị anya.
Ollie Watkins Eziokwu Eziokwu:
Iji kechie Ollie Watkins Life Akụkọ anyị, lee ụfọdụ eziokwu ga - enyere gị aka ịghọta akwụkwọ ndụ ya niile.
Eziokwu # 1 - Nkwụnye ụgwọ ọnwa na ego site na nkeji nke abụọ:
Kwa Afọ £ 3,906,000
kwa ọnwa £ 325,500
Kwa Izu £ 75,000
Kwa .bọchị £ 10,714
Kwa elekere £ 446
Kwa Nkeji £ 7.44
Sekọnd £ 0.12
Anyị etinyela atụmatụ nke ọma na ụgwọ ọnwa Ollie Watkins dị ka elekere na-akụ. Chọpụta n'onwe gị ego ole ọ kpatarala kemgbe ị bịara ebe a.
Nke a bụ ihe Ollie Watkins akwụla ụgwọ kemgbe ị malitere ilele Bio a.
Eziokwu # 2 - Football arụsị:
N'adịghị ka ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na-eto eto bụ ndị na-efe arụsị C. Ronaldo na Lionel Messi, Watkins gosipụtara nke ahụ Thierry Henry abụwo ihe nlereanya ya mgbe niile. Nke a bụ ihe ọ gwara ndị mgbasa ozi mgbe ọ na-ekwu maka arụsị bọọlụ ya;
“Ana m agbalị mgbe niile ịdabere na egwuregwu ịgba egwu nke Thierry Henry. Ọ bụ ya mere m ji anya ụgbọala ndị na-agbachitere ma na-achọ ime ka ihe mee mgbe m nwetara bọọlụ. ”
Eziokwu # 3 - Pet:
N'ime afọ ole na ole gara aga, ọtụtụ ndị egwuregwu egosila mmasị dị ukwuu na ịnweta nkịta dịka anụ ụlọ ha. N'otu aka ahụ, Watkins nwekwara mmasị ijide ya na obere nkịta ya mara mma, nke nwere ike ịmasị gị mma. Anyị nwere ike ghara ịghọta n'ezie ihe kpatara ndị egwuregwu bọọlụ ji nwee nkịta n'ụlọ ha, mana anyị nwere obi ike na ọ dị ha ka ha nwere anụrị na anụ ụlọ ha.
Eziokwu # 4 - Ollie Watkins Religion:
Na-ekpe ikpe site na aha ya, Ollie Watkins mụrụ n'ime ụlọ ndị Kraịst. Otú ọ dị, ọ na-ahọrọ ikpuchi eziokwu banyere nkwenkwe ya ugbu a na nzuzo. Ka a sịkwa ihe mere na ọ naghị ekwukarị banyere echiche okpukpe ya na mgbasa ozi.
Eziokwu # 5 - Ollie Watkins Profaịlụ:
Site na ọkwa Watkins na-eme na Aston Villa, o tosiri inwe ogo karịa ọkwa nke Fifa nyere ya. Ka o sina dị, ka anyị nwee olileanya na ọ ga-aga n'ihu na-asọ ndị Fans ya egwu site na ịgba bọọlụ ya na Premier League.
Aha n'uju: Oliver George Arthur Watkins
Aha Nick: Ollie Watkins
Ụbọchị ọmụmụ: 30th December 1995
Ebe amụrụ onye: Torquay, England
Nwa nwanyi: Ellie Alderson
Rygwọ ọnwa kwa afọ: £ 3.9 nde
elu: 1.8m (5 ′ 11 ″)
Akụkọ ndụ nke Ollie Watkins egosila anyị na ndị mmadụ ga-anwa ịkụda gị mkpebi mkpebi gị. Agbanyeghị, ọ chọrọ obi ike na nnọgidesi ike iji jigide nrọ gị ma merie nkwupụta ọjọọ nke ndị mmadụ.
Cheta, ịga nke ọma ga-adọta ndị mmadụ mgbe niile. N'ihi ya, gbalịa ịrụ ọrụ nke ọma n'ihe niile ị na-eme ma lelee ka ndị mụrụ gị, ndị ikwu, ndị enyi na ndị bịara abịa ga-esi mee emume gị.
Daalụ maka ịgụ Ollie Watkins Life Story na Biography eziokwu. Naanị mara na anyị nọ ebe a iji nye gị ọdịnaya dị mma. Na agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọta ihe ọ bụla nke na-adịghị ka ọ dị mma na edemede anyị, biko kpọtụrụ anyị.